IiPundits zeendaba zeNtlalo zonakalisa iMicimbi yezeNtlalo | Martech Zone
IiPundits zeendaba zezeNtlalo zonakalisa iMicimbi yezeNtlalo yezeNtlalontle
NgeCawa, ngoFebruwari 8, 2015 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Wakhe wenza impazamo kwimidiya yoluntu? Ndizenzile ezimbalwa (kwaye ndiqhubeke nokuzenza). Hayi iimpazamo ezinkulu, kodwa iimpazamo akukho ngaphantsi. Ndenze amagqabantshintshi angenakuthintelwa. Ndibagxekile abantu endibahloniphileyo ngoko ke bacinga ukuba ndingumntu wothimba. Ndabelana ngezopolitiko-i-grail engcwele ye-media media blunders. Ndidibanisa ishishini kunye nolonwabo kwiiakhawunti zam zorhwebo nezam.
Ndimele ndincancise imidiya yoluntu.
Ungacinga… kodwa ndinabalandeli abalandelayo nabasandula ukudalwa kunye nobudlelwane kwezoshishino yonke imihla. Ngabacebisi, ndingu ukwenza yonke into engalunganga… Kodwa iyasebenza. Kwaye nokuba ungamazi, izicwangciso ezithi Highbridge Ukuthunyelwa kweenkampani kudala imbuyekezo entle kutyalo-mali. Into abanye babacebisi beendaba zentlalo bayayiphepha.
Ndibhalile ngaphambili malunga elubala xa kuthelekiswa nobunyani ke andizukubetha ihashe elifileyo apha (uh-oh… sukubiza iPETA). Kodwa ndiyacaphuka xa ndibona umcebisi kwimidiya yoluntu ethatha inkampani ukwenza umsebenzi ngempazamo.
Ingxoxo yamva nje yiCoca-Cola. Benze i-Twitter bot yabo #Yenza ukuba onwabe umkhankaso, uchaza injongo yawo kupapasho ndaba ndaba:
Ukujongana nokungakhathali okusasazekayo okungcolisayo kwimithombo yeendaba zosasazo kunye nemisonto yokubeka izimvo kwi-intanethi
Wow… iqumrhu elizama ukuzisa ulonwabo oluncinci emhlabeni. Ngokuqinisekileyo yayikukuzilolonga okwenziweyo ke kukho intengiso encinci ejikelezayo kuyo. Kodwa ibisisiqhinga sikaCoke sokushicilela amashumi eminyaka… sibonakale apho kukho iinkumbulo ezintle. Imbi kakhulu, akunjalo?
Ewe, uAdam Pas kaGawker, wenza i-Twitter bot ukuya kwimigca ye-tweet evela kwi-Mein Kampf ka-Adolf Hitler kunye nokunxibelelana nabo ngethegi ye- #MakeItHappy. Iskimu sasebenza. Ixhokonxe i-Coca-Cola's bot ukusasaza isicatshulwa sikaHitler kwaye ivelise iifoto ezintle ngethegi ye- #YenzaIHappy iiyure ezimbalwa.
UGawker uthumele i-stunt kwaye i-Intanethi iyayithanda. I-Coke yehlise i-bot.
Kwenzeka ntoni emva koko? Imithombo yeendaba zosasazo loluntu yanyanzela uCoca-Cola ngenxa yesiphoso sabo kwimidiya yoluntu. Ndiyifundile kwisondlo sam sonke - esigcwele ngabahlobo kunye noogxa bethu abadibana neenkampani kwizicwangciso zabo zemidiya yoluntu. Yenza uphando lwe #MakeItHappy kunye ne-Twitter kwaye uza kubona ukuba ndithetha ukuthini. Ngokukrakra… babatyabula.
Kunyaka ophelileyo, ndenza intetho kwiNtlalontle yeNtengiso yezeNtlalontle apho ndadwelisa zonke izinto eziphosakeleyo kwimicimbi yezentlalo kwaye ndangqina ukuba akukho nanye inefuthe elingapheliyo kwibrendi. Ngokukodwa- akukho namnye!
Imibutho eyoyika ngokufa ngenxa yeempazamo zemidiya yoluntu. Uyazi ukuba kutheni besoyika iimpazamo zemidiya yoluntu? Kungenxa yokuba wonke umcebisi kwimidiya yoluntu phaya etyhola abasebenzi kunye nokuqikelela kwesibini isicwangciso abasisebenzisayo esiphela ngempazamo. Ayizizo iziphumo zomkhankaso ezonakalisa igama lenkampani, ngamajelo eendaba abavelisi beendaba zosasazo ukuba bavelise iintloni.
UCoca-Cola akenzanga nto Ephosakeleyo Ngomkhankaso wabo we-Twitter bot ofanelwe kukusabela abaphengululi baphendule ngawo. Ukuba ufuna ukuthatha nabani na ukuba enze umsebenzi, thatha uGawker enze lo msebenzi. I-IMO, uAdam Pash uyidick yokusebenzisa kakubi iphulo kunye noGawker ngokuqhayisa ngalo ukuze badlale i-gotcha njengeqela lolutsha oluphambi kwexesha. Ndinokuba nomfanekiso ngqondweni wabo begigitheka njengoko isicatshulwa sokuqala sikaHitler sayenza kwi-Coke's Twitter feed.
Hei Gawker… khula.
Ingcebiso yam kwiiNkampani
Lixesha lokuba uye ekhubekisayo ngale crap. Khusela iimveliso zakho, lungisa iindlela zakho, kwaye uqhubeke. Utshintsho olumangalisayo kwintengiso nakumajelo eendaba aziswe yimithombo yeendaba kukukwazi ukunxibelelana ngqo neempawu. Umhlaba ucela ukungafihli nto kwaye ujonge ngaphakathi kwimibutho abasebenza nayo ukuze bazive bonwabile ukuba imali abayichithayo ilungile. Ukungafihli nto kubeka umngcipheko, nangona kunjalo. Uya kuzenza iimpazamo. Kwaye kulungile!
Awunakho ukuxela kwangaphambili ukuba omnye u-dick uza kuhlasela umkhankaso wakho wolonwabo kunye noHitler ucaphula nokuba ungazama kangakanani. Ukungafihli nto kuthetha ukuba usengozini kwiimeko ezinje, kodwa njengokuba uphuhlise iqhinga lokuphumeza eli phulo, ungaphuhlisa isicwangciso xa izinto zingahambi kakuhle.
Ndingathanda ukubona impendulo kawonkewonke evela eCoke exelele umhlaba ukuba izenzo zikaGawker zizinto kanye ezazisenziwa liphulo labo ukuzama ukoyisa. Ndingavakalisa usizi lokuba inkampani yemithombo yeendaba iya kwezi ziphantsi ukuze ihlazise uphawu. Ndiza kulithatha phantsi eli phulo ndize ndicele abantu ukuba babhale iGawker kwaye babonakalise ukuphoxeka kwabo.
Nazi iimpazamo kwimidiya yoluntu ukuba iinkampani zinokuyiphepha, kodwa ukusilela ekubalekeni ingqumbo yeziyatha kwi-Intanethi ayisiyiyo enye yazo.
Ingcebiso yam kwiiPundits zeendaba zeNtlalo
Xa usenza uphawu lokwenza lo msebenzi, utshabalalisa ishishini lakho. Ukoyikeka kwakho kunye nokwazisa ukuba uphawu lujiyile njani akuncedi. Iqhuba ngakumbi nangakumbi iinkampani ukuba zinikezele ekuhleni kwaye zibuyele ekufihleni ngasemva kweelogo, izilogeni kunye nentengiso yendlela enye.
Ukuba bendiluphawu oluphambili andiqinisekanga ukuba ndingakhe ndisebenze nomcebisi kwimidiya yoluntu otsiba kwi-bandwagon ukuze ahlazise inkampani kwi-Intanethi. Imithombo yeendaba kwezentlalo isebenza kweyona nkampani ikhululekile ukunxibelelana nabantu, hayi xa kufuneka behleli kumagumbi okudlala bedlala yonke into ngaphandle koloyiko lwebhlog elandelayo oya kuyibhala xa izinto zingahambi kakuhle. Yiyeke.
Yeka ukuthengisa iinkonzo zakho kuloyiko kwaye uthengise, endaweni yoko, kwisithembiso sendlela iinkampani ezinokuthi zilutshintshe ngayo uphawu lwazo kunye nokwakha uluntu kunye nabathengi babo.
tags: UAdam Pascoca colaCokeumhlanazenzelabacebisi kwimidiya yoluntuiimpazamo kwimidiya yoluntuIingcali zosasazo zasekuhlaleniI-twitter bot
Isikhokelo sokuGcina igama lakho kwi-Intanethi
Feb 9, 2015 ngo-9: 55 AM
Ndivumelana nawe ngokupheleleyo apha. I-Gawker yi-jerk hayi iCoke. Kakade ke, ukusebenza Gawker inokuba isohlwayo ngokwayo.
UCraig Michael Patrick
Feb 9, 2015 ngo-11: 09 AM
Inqaku elikhulu. Ndiyawuthanda umzobo - yonke into isibambiso esongezelelweyo kufuneka sinxibelelane ngaphandle kwegama elibhaliweyo. Bravo.
Ndikrokrela ukuba omnye wemicelimngeni kumajelo eendaba ezentlalo kukwahlulahlula, oku kuthetha ukuba kukho ukuthengisa, itekhnoloji, uyilo, ukubhala phantsi, njalo njalo; zonke iinkalo ezingafaniyo zonxibelelwano kuluntu lolwazi kwasebusaneni.
Iphulo le-Coke libonisa i-paradigm enomdla, kodwa njengomntu onxibe iminqwazi emininzi kakhulu kwicandelo lonxibelelwano, kubandakanya itekhnoloji yokuhlala, ndingangqina inyani enye elula xa usilwa nerhamncwa lomthwalo losasazo lwentlalo: ungaze, ungaze uzenzele unxibelelwano lwakho. umsebenzi wephulo. Ubashiya bevula. Kukulingana nedijithali ukuya emfazweni ngaphandle kwe-bullet-proof vest - izinga labantu abenzakeleyo liya kuba phezulu ukuba uneprofayile ephezulu. YI-Intanethi, emva kwayo yonke loo nto: Ukungaziwa, uMkhosi woMkhosi we-elektroniki waseSyria, iLizard Squad, onke amaqela e-hacker ngamanye amaxesha ajolise kwii-comms. Lo wavela nje umphefumlo impish e Gawker.
Kwaye ke, ewe, kukho iBill Cosby kwimidiya yoluntu fiasco. Wowu.
Ukubagxeka, nangona kunjalo, kufana nokugxeka inja ngokungena ekhitshini lomgqomo wenkunkuma: kungokwemvelo yabo. Kwaye ukuba ushiya isiciko kwi-can, kakuhle - ngelishwa (kwaye ndithetha ukuba ngokunyanisekileyo - akufanele kube ngolu hlobo, kodwa kunjalo), yiloo nto ufumana: i-mess. Sekunjalo, yimfundo yonke. Wakuba usazi ubume bento ethile, uya kuba nolwazi olungcono malunga nendlela yokujongana nayo kwixesha elizayo. Mhlawumbi kungcono ukubopha iphulo ngevest yobungqina bembumbulu (ukwenza isikweko) kwaye ulungelelanise nabantu (ewe, oko kuhlala kukho imiba yabasebenzi eyakhelweyo, ke).
Yiwikethi encangathi, eli jelo. Shiya indawo evulekileyo kwaye uya kufumana ngokukhawuleza umntu onebhulethi yedijithali enegama lophawu, enye ingozi ye-Intanethi, enye intsomi yokulumkisa kunxibelelwano.
Enkosi ngokundenza ndiqwalasele ezinye iijiyometri zale meko kunye nenqaku lakho.
Feb 9, 2015 ngo-1: 41 PM
Isithuba esihle! Enkosi!
Feb 9, 2015 ngo-2: 10 PM
Okunjani ukuhlaziya ukuthatha - wow! #ShameonYaGawker
Kuyinyani ukuba ngelixa ii-gurus zamajelo eendaba zentlalo zixhasa ubunyani bobunyani kunye nokungafihli nto, zichasene kakhulu naso nasiphi na isihloko esiphikisanayo - ndiyazi ukuba ndiyaphuma kwimiba enjalo, ngoko ke ndiyabulela kumntu onjengawe ngokumela into oyikholelwayo # UKWANGA
Feb 9, 2015 ngo-5: 00 PM
Isithuba esihle, ndinomdla wokubona ukuba ucinga ntoni ngale nto encinci yokongeza ukusuka kwiGawker.
Feb 9, 2015 ngo-8: 12 PM
Ndicinga ukuba Gawker i brand shitty ukuba ayingomhlobo wakho. 🙂